Somaliland: Imaaraadka oo laba isbitaal oo casri ah ka furay Burco iyo Berbera – Xorriya Online
Somaliland: Imaaraadka oo laba isbitaal oo casri ah ka furay Burco iyo Berbera
Wefdi ka socda Sanduuqa Khayriga ah ee Sheekh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation ayaa isbitaalo yar yar balse muhim u ah degaannada laga sameeyey ka furay laba degmo oo ka tirsan Somaliland.
Isbitaalka koowaad waa “Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Hospital,” oo laga dhisay Berbera, halka midka labaad oo ku shaqo leh hooyada iyo dhallaanka laga furay Burco oo ah magaalada 2-aad ee ugu ballaaran Somaliland, taasoo ka dhigan inay degmooyinkani heli doonaan adeeg caafimaad oo cusub.
Isbitaalka Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ayaa qaada 40-sariirood, wuxuuna ku fadhiyaa bed dhan 1,351 mitir oo laba jibbaaran, wuxuuna leeyahay qayb soo dhowayn ah, qol qalliin, 8 sariirood oo ay bukaannadu seexan karaan, 6 qaybood oo wax lagu daweeyo, oo ay ku jiraan qayb ilkaha ah, 3 qol oo daryeelka deg degga ah (ICU) iyo qol gargaarka deg degga ah (sokoorso). Waxaa kaloo lagu qalabeeyey agab caafimaad oo casri ah iyo matoor dhab dhaliye ah oo kayd ah.
Isbitaalka kale oo isna 40-sariirood qaadkiisu dhan yahay kuna fadhiya bedka midka kale ee Berbera ayaa uga duwan in qolalka gargaarka deg degga ihi ay 3 yihiin, maadaama la keenayo haweenka foolanaya, iyadoo lagu tala jiro in la yareeyo kuwa u umul raacda gargaar caafimaad la’aantii.